गहुँको जमराको रसको यस्तो चमत्कारिक लाभ | सुदुरपश्चिम खबर
गहुँको जमराको रसको यस्तो चमत्कारिक लाभ
जमरा भन्नसाथ हामी दशैं सम्झन्छौं । अक्सर दशैंमा विभिन्न अन्नको जमरा उमारेर शि’मा सिउरिने गरिन्छ । जमरा शिरमा सिउरिन किन योग्य छ भन्ने कुरा यसको औषधीय गुणबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । यो एक आयुर्वेदिक औषधि हो, जो हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अत्यान्तै लाभदायक छ । के पाइन्छ गहुँको जमरामा ? जमरा राम्रो आहार पनि हो ।
खासगरी गहुँको जमरा उमारेर नियमित रुपमा त्यसको रस पिउँदा निकै लाभ मिल्छ । किनभने यसमा पोषक तत्व पाइन्छ, जसमध्ये क्लोरोफिल अधिक हुन्छ । त्यसका साथै प्रोटिन, भिटामिन, फाइबर, क्याल्सियम र कार्बोहाइड्रेट्सको राम्रो स्रोत हो, गहुँको जमरा । के लाभ मिल्छ ? गहुँको जमराको जुस सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ ।
खासगरी मुख तथा दाँतसम्बन्धी समस्या हटाउन, रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रित गर्न, पाचन यन्त्र बलियो बनाउन, कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्न गहुँको जमरा उपयोगी हुन्छ । त्यसका साथै कतिपय छा’लाको सम’स्या र के’सको सम’स्यामा पनि गहुँको जमरा लाभदायक हुन्छ । रेसेपीः कसरी बनाउने गहुँको ज’मराको जुस ? ग’हुँको जमरा त्यसै चपाएर पनि सेव’न गर्न सकिन्छ । साथै यसबाट रस नि’कालेर पिउन पनि सकिन्छ ।
ग’हुँको जम’राको जुस बनाएर पिउँदा स्वादिलो हुन्छ । कसरी बनाउने त जुस ?
१. आठदेखि दश वटा ग’हुँको ज’मरा जरामै का’टेर रा’म्ररी धुने । अब यसलाई कु’टेर रस निकाल्ने ।
२. अब एक सफा कपडामा त्यसलाई राख्ने र निचो’र्नुपर्छ । यसको रस कुनै गिलासमा राख्नुपर्छ ।
यदि तपाई कुनै रो’गबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने प्रतिदिन तीसदेखि पचास एमएल जुस पिउनुहोस्, दिनमा दुई पटकसम्म । सुरुमा गहुँको ज’मराको रस थोरै पिउने र क्रमस मात्रा बढाउँदै लाने । एक हप्तामा कम्तिमा पाँच दिन यसको से’वन गर्नुपर्छ । कसरी उमा’र्ने गहुँको जमरा ? अ’र्ग्यानिक बि’जको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिला ग’हुँको बिजलाई एक भाँ’डामा आठ देखि दश घण्टासम्म पानीमा भिजाएर राख्ने । अब कुनै गमलामा थोरै माटो राख्ने । उक्त गमलामा त्यती नै बिज राख्ने, जसलाई माटोले राम्ररी ढाक्न सकिन्छ । अब गमलामा पानी राखेर ओझेल भएको स्थानमा राख्नुपर्छ । एक हप्तासम्म एक(एक वटा गमलामा यसरी नै बिज रोप्नुहोस् ।
सात दिनपछि पहिलो पटक रोपेको गमलामा गहुँ अंकुराउन थाल्छ । खान योग्य जमरा काटेपछि उक्त खाली गमलामा पुन बिज रोप्नुहोस् । गमलामा हरेक दिन पानी हाल्नुपर्छ । यसलाई घामको सोझो सम्पर्कमा राख्नु हुँदैन । गहुँको जमरा उमार्नका लागि १८ देखि २० डिग्री तापमान उत्तम हो । (urlabarinews.com बाट साभार)
जान्नुहाेस, निलो दाग बो क्सी ले रग त चुसेर देखिएकाे हाे...
मानिसकाे शरिरमा निलाे दाग देखा पर्याे भने बाेक्सिकाे आराेप लगाउने गर्छन् । के साँच्चै बाेक्सिले टाेकेकाे हाे त ? कहिले काहिँ देखिने याे दाग...
मानिसहरुले आफ्ना शरीरका विभिन्न अंगहरुलाई स्वस्थ राख्न हरसम्भव प्रयास गर्छन् तर, धेरैले दाँतको भने ख्याल गर्दैनन् । धेरै मानिसहरुलाई दन्त स्वास्थ्यको बारेमा राम्रो जानकारी...
जा’डोमा ता’तो तातो गु’न्द्रुक खानुको कति धेरै फाईदाहरु
दुः’ख वा अभा’वको खान्की भनिन्थ्यो, गुन्द्रुकलाई । तर, अहिलेका पुस्ता गुन्द्रुक भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । त्यसो त अहिले हाम्रो मेनुमा विश्वकै खानेकुरा उपलब्ध छ...
प्रे’शर हा’ई छ ? झुक्किएर पनि खा’नु हुदैन यस्ता कुरा
उच्च र’क्त’चाप व्य’वस्थापनका लागि सि’फारिस गरिएको खा’नपान व्य’वस्थालाई चि’कित्सा वि’ज्ञानमा दा’श खानपान वि’धि भनिन्छ । यो खानपान वि’धिलाई उच्च र’क्तचापको रो’कथाम र उ’पचार एवं...